Bogagga Arooska - Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato | Bezzia
Bogagga Arooska: Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato!
Susana godoy | 05/05/2022 16:00 | Aroosyada
Waxaan ognahay in arooska ay tahay inaad ku xirto waxyaabo badan si aakhirka, aan u helno maalin riyo ah. Sababtan awgeed, mid kale oo ka mid ah qodobbada muhiimka ah ee lagu xisaabtamayo waa bogagga arooska. Waa run in aan dhammaan aroosyada la arkin. Inkasta oo marka ay sameeyaan, waxay la yimaadaan macaan iyo asal ahaan maalin gaar ah.
Sidaa darteed, haddii aad ka fekereyso inaad qaadato xafladaha arooska, waxaa laga yaabaa inaad bilawdo bilawga oo aad ka fikirto maxay yihiin hawlahooda (maadaama ay heli karaan wax ka badan hal), maxay ku qaadi doonaan gacmahooda, goormay tahay inay galaan iyo qaar kaloo badan. Markaa, ha lumin faahfaahinta oo hubaal, ka dib markaad ogaato wax kasta oo aad u baahan tahay, waxaad dooran doontaa iyaga.
1 waa maxay bogag
2 Sidee buu u lebbisan yahay bogga?
3 Waa maxay shaqooyinka bogagga
4 Da'da bogagga arooska
waa maxay bogag
Bogagga meherku waa kuwa carruurta ah ee haldoorka u ah xafladda arooska. Markaa mid ka mid ah hawlaheeda, sida aynu arki doonno gadaal, waxay noqon doontaa inay raacdo aroosadda iyo aroosadda. Laakiin waa run in ay sidoo kale macno leeyihiin taas oo ah in doorkoodu aanu ahayn wax cusub laakiin waa in aan dib ugu laabanaa Rooma hore. iyada dhexdeeda, waxaa soo muuqday hablo yaryar oo arooska iyo aroosadda u soo bandhigay ubax iyo sarreen labadaba. Labada ikhtiyaarba waxaa loo tixgeliyey astaanta barwaaqada iyo sidoo kale bacriminta. Wax yar oo yar ayaa wiilal iyo gabdhaba nolosha u huray socodkii si nasiibku u garab galo lamaanaha is guursanaya.
Sidee buu u lebbisan yahay bogga?
Xaqiiqdu waxay tahay in ay jiraan qaabab badan oo dharka ah. Waligaa waxaad dooran kartaa wax yar oo ku xiran mawduuca arooska. Laakiin runtu waxay tahay, sida caadiga ah, gabdhuhu waxay xidhaan dharka midabada iftiinka ah sida caddaan ama ecru. Oo ay la socdaan kabo nooca ballerina ah oo ay wataan ubaxyo ama qaansooyin ay timahooda ku jiraan. Halka wiilashu ay xiran karaan shaadh iyo jaakad, iyo sidoo kale suudh iyo qaanso, haddii aad rabto in arooskaagu uu yeesho qaab aad u casri ah. Laakiin sida aynu nidhaahno, waxaad ku qaadi kartaa qaab aan caadi ahayn oo sidoo kale aad ugu raaxaysan doona iyaga.
Waa maxay shaqooyinka bogagga
Waxay yeelan karaan dhowr hawlood, sidii aan horay u soo marnay. Qaar baa mas'uul ka ah imaatinka marka ninka arooska ah la sugayo oo ay keenaan calaamad muujinaysa imaatinka aroosadda. Waxay noqon kartaa odhaah xariif ah ama maya, laakiin waxa loo qaabayn doonaa inay noqoto digniin fudud. Wax yar ka hor imaatinka aroosadda, gabdhuhu waxay soo muuqan doonaan dambiilayaal iyo ubaxyo ubax ah, kuwaas oo ay ka tagi doonaan.. Sidoo kale, bogag kale oo aroos ah ayaa xiran kara isbahaysiga waxayna istaagi karaan labada dhinac, oo ku xiga arooska iyo arooska. Ugu dambeyntii, aroosadda ka dib, bogag kale ayaa laga yaabaa inay soo baxaan kuwaas oo leh shaqada ay ku dhejiyaan dharka iyada, ilaa iyo inta ay u baahan tahay.
Da'da bogagga arooska
Xaaladdan oo kale, da'da sidoo kale waa arrin. Sababtoo ah waxaa lagu talinayaa in ay ka weyn yihiin 3 sano iyo ka yar 8. Wax kasta oo ka badan, sababtoo ah kuwa aadka u yar ayaa daalan doona si degdeg ah mana fulin doonaan howlgalka iyaga u dhigma. Sidoo kale, marka ay weynaadaan waxaa laga yaabaa inaysan rabin inay ka mid noqdaan xafladda arooska. Markaa, inta u dhaxaysa 3 iyo 8 sano waxaa loo arkaa da'da wanaagsan ee la tixgeliyo. Hubaal iyaga iyo iyaga, aroosku wuxuu noqon doonaa midka ugu asalka ah. Haddii aad leedahay hal bog oo keliya, markaa kani waxa laga yaabaa inuu yahay midka lagu qabanayo siddooyinka. Haddii aad lammaane leedahay, had iyo jeer waxay noqon kartaa labadiina kuwa daryeela isbahaysiga. Inkastoo aysan jirin tiro gaar ah oo boggaga arooska ah, waa run in sidoo kale lagu talinayaa in aysan jirin wax ka badan 6. Hubaal, inta u dhaxaysa xubnaha qoyskaaga iyo carruurta saaxiibada qaarkood, waxaad awoodi doontaa inaad ku raaxaysato taabashadaas gaarka ah had iyo jeer. arooskiina!!
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » nololeedka » Aroosyada » Bogagga Arooska: Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato!
Maxaad samaynaysaa haddii aanad jacaylka u qabin lamaanahaaga
Qalabyada qalabyada si ay ugu habboonaadaan qurxinta